IGUMBI KWI-VILLA YENKULUNGWANE YE-17 EVALWE IMODENA
I-villa emangalisayo ye-700 ifakwe kwipaki enkulu. Igumbi elihle elizuba kumgangatho wesibini libanzi kakhulu kwaye lijonge igadi yeentyatyambo entle. Inebhedi ekhululekile kakhulu kunye nenkulu, ii-closets ezinkulu ezi-2 ezinedrowa, indawo yomlilo. Igumbi lokuhlambela lingaphandle kwegumbi kwaye lisetyenziswa kuphela.
Igumbi eliqaqambileyo neliphangaleleyo kwi-villa entle ehonjiswe ngokutyebileyo kunye nefenitshala eqala ngenkulungwane ye-17 ekwilali encinci yakudala, kude nengxolo yezixeko ezikhulu, ejikelezwe buhlaza kunye noxolo. Indawo yomlingo, yothando, kodwa kwangaxeshanye enobuntu obuqinileyo. Kuya kuba luthando ekuqaleni kokubona! Ipropathi ijikelezwe yipaki enkulu enombono ophefumlayo weenduli kunye nelali yamandulo.
Kude kufuphi neSavignano (5Km) kukho ilali ebizwa ngokuba yiVignola, edume ngenqaba yayo kwaye kuba ngoMeyi wonyaka ngamnye kwenzeka umthendeleko wamacheri. IZocca, apho ahlala khona uVasco Rossi, iSpilamberto apho unokufumana khona owona mzi-mveliso we-vinager endala, i-balsamic millet yeviniga edumileyo kwihlabathi liphela. I-Modena kunye ne-Bologna izixeko ezibini ezibalulekileyo ze-Emilia Romagna (imizuzu engama-35)
URosa, xa ndingekho, uza kuyihoya indlu. Indlu ye-janitors ifumaneka ekuqaleni kwepropati. Ungaqhagamshelana noViola kunye nosapho lwakhe ngayo nayiphi na imfuno